Guri | Xarunta islaamka ee Helsinki
Markazka Helsinki Islamic Center waxa uu dhamaan ummadda Muslimka ah ugu tahniyadaeynayaa Ciidul Al-fidriga oo ah Jimcaha 15.6.2018, waxaana Allaah ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii laga aqbalay acmaashooda wanaagsan, aamiin aamiin. Salaadda Ciidda Hadduu Allaah idmo waxaa la tukan doonaa 15.6.2018 saacaddu marka ay tahay 09:00 cagta Talin Jalkapallohalli ee Pitajmaki, saacaddu marka ay tahay 09:00. Cinwaanka goobta waa : Purotie 8 , 00380 Helsinki. Tareenada aad soo raaci karto : Pasila ama lepavaara A . Tareenka waxaa looga dagayaa stopka Valimo. Basaska mara waa , 231 ,270 , 248 , 550 oo ka soo baxa centerka ama lepavaara . Waxa kaloo soo mara basaska 39 ,14 ka soo baxa Kamppi. Pasilan waxaa ka baxa baska 59. Itäkeskus waxaa ka soo baxa 550.
Eid announcment 2018 somali
Helsinki Islam Keskus masjidka Alhudaa ee pasila waxaa uu dadweynaha muslimka ah ogeysinayaa maalinka Khamiista 17/5/2018 ay tahay kowda bisha Ramadaan. Waxaanan idiinku hambalyaynaynaa munaasabadaas Ramadaanka, annagoo isu dardaarmayna in aan ku dadaalno cibaadada. Ramadaan kariim. Maamulka Idaraada +358451282818
Ramadan time table 1439H 2018
Eid announcment 2018 ENGLISH
Wakhtiga salaada sanadkoo dhan halkan ka rogo
Ku sadaqayso masjidka
Ku soo dir sadaqadaada akoonkan Helsinki islam keskus
Akoonka namarkiisa waa:
Nordea Bank Finland's
BIC code waa NDEAFIHH